Talinayo Video Qaabka iyo Settings u LG Optimus
> Resource > Android > talinayo Video qaabab LG Optimus
Isku dayga in la qabsado oo la ugu danbeeyay ee ay muujinayso TV ama taxane aad LG Optimus? Ka careysan in qaar ka mid ah files video kaliya u muuqdaan aadan in Radidiyaha aad u fiican ama aan la aqoonsan by qalab aad ee dhan? Miyaad taqaan qaabab video taageeray for loo maqli aad LG Optimus? Hubi tan. Waad damaanad ah in la ogaado qalab kale oo badan tan iyo sidoo kale ugu fiican video goobaha iyo qaab loogu talagalay qalab aad ka dib.
Qeybta 1: taageerayaan qaabab File u LG Optimus
Qeybta 2: Best Video Meeshay u LG Optimus
Qeybta 3: horena Video Settings u LG Optimus
Liisaska qaabab file taageeray yihiin sida ku cad hoos ku qoran:
MP4, H.263 iyo H.264 (model Optimus Qaar ka mid ah Radidiyaha karaa H.264 iyo DivX)
AAC, MP3, regelingen, WMA, AAC +, AAC-LC, Amr-FG
Sida kor ku cad Qaybta 1aad, awoodo aad u badan dejinta iyo video files loo maqli karo in ay yihiin mid ka mid ah qaab ah MP4, H.263 ama H.264. Si kastaba ha ahaatee, ugu qaab video ugu fiican ee aad LG Optimus weli waa MP4 ah ku aaday kooxda codec H.264 video iyo AAC audio.
Haddii aad soo bixi wax kasta oo files video in aan ay taageerayaan liiska, isku day in aad soo Wondershare Video Converter Ultimate . Waxaad xitaa ma ah in la ogaado oo ku saabsan goobaha ay ku sugan si ay u awoodaan in ay isticmaalaan. The 'ugu fiican' video goobaha ay mar horeba lagu daray, waayo, user ee sahlo. Sidaas, waxaad samayn lahaydeen oo dhan waxaa si fudud u dooro magaca qalab ee brand iyo model.
On top of in, Wondershare Video Converter Ultimate waxaa sidoo kale ka buuxaan taallo burbur ah oo qaababka kale ee ka sixiddiisa in download toos ah browser, qoraaga iyo DVD kuu gaar ah gubi iyo iwm
Waxaad had iyo jeer ka soo dejisan kartaa version maxkamadda oo ay tijaabiyaan on qaar ka mid ah ee hadda jira faylasha video. Xusuusnow in aad mar walba nuqul file ah in ay ka shaqeeyaan si doonaa weli waxaad haysataa nuqulka asalka ama sayidkiisa in wax kiiska qaldamaan.
Marka lagu rakibay, waxaad si fudud u jiidi-iyo-hoos u kartaa video files gal software ah. Riix Edit button haddii aad rabto in aad wax ka bedel faylasha aad. Haddii kale, si toos ah u sii wado in ay doortaan magaca brand iyo model ah qalab ka Qaabka Output .
Fiiro gaar ah : Just guji Settings midig kor ku xusan loogu badalo badhanka si aad u eegto faahfaahin dheeraad ah.